Mudzidzi Wepasi Pese s Budirira NeDhigirii Kubva Hodges U
Vadzidzi Vepasi Pose Vanowana Iyo Inokwikwidza Edge KuHodges University!
Uri parizvino uri kugara pasi rese uye uchifunga kuwana dzidzo yako muUnited States? Wawana imba yako kuHodges University!
Takatarisana nekugadzira nzira dzakagadziriswa dzevadzidzi vanoshanda uye takagadzirisa maitiro edu ekugamuchira kuti zvive nyore kune vedu vekunze vanyoreri kuti vawane kubudirira kwavo kuHodges U. Uyezve, chinangwa chedu kuvaka nharaunda dzakasiyana uye kugamuchira vadzidzi vese akasiyana mamiriro zvisinei nerudzi, ruvara, chitendero, chinamato, murume kana murume, zvebonde, kwakatangira nyika, kana kugona / kuremara.
Iva Akashinga. Kutanga kuHodges University Nhasi.
Anonzi "Wepamusoro 40 Akanakisa Makoreji muFlorida"
Anonzi as 3rd Yakachengeteka Campus muFlorida
Maodzanyemba akadziva kumadokero Florida iri tropical oasis paradhiso kune vanhu vanobva kwakasiyana hupenyu
tora makirasi pedo nemichindwe, zuva, uye jecha jena mahombekombe
Kirasi Imwe Pamwedzi Hyper Inotarisa Fomati anosangana Yakazara-nguva Kunyoresa zvinodiwa
Mudzidzi uye Shanduro Yevashanyi Chirongwa (SEVP) Vimbiso chikoro
We zviite nyore kuti iwe uwane magwaro anodiwa kuti uite yako Dzidzo yeUS zvinogoneka
Makore makumi matatu e Kushumira Dzidzo yepamusoro vadzidzi
Makirasi akapa Online, On-kembasi, Blended, kana TEC mafomati. TEC makirasi anotendera iwe rusununguko rwekutora mamwe makirasi kurarama kubva chero kupi zvako munyika.
Tsvaga Zvirongwa zvedu
Ruzivo rweVadzidzi Vepasi Pose
Undergraduate Mari Yekushandisa: $ 20
Vakapedza Kudzidza Mari Yekushandisa: $ 50
Ndokumbirawo ushande nemumiriri wako wekubvuma kuti umise nzira yakapusa yekupa yako yekunyorera fizi.
Hodges University inomhanya pamwedzi yekudyiwa sisitimu yevangangove vadzidzi inoenderana neyedu yemwedzi kosi yekutanga mazuva. Iwe unozofanirwa kuongorora paunenge uchida kutanga fundo yako kuHodges uye kuronga kutanga yedzidzo yepasi rese yekunyorera maitiro kanenge mazuva makumi mapfumbamwe (mwedzi mitatu) pamberi. Izvi zvichatibvumidza isu kupedzisa kugadziriswa kwechikumbiro chako, mamwe marekodhi, uye maVisa.
Kuwedzera Ruzivo rweVadzidzi Vepasi Pose
Kuti uwane ruzivo nezvezvikwereti, kudzidza uye rubatsiro rwemari, inishuwarenzi yekurapa, uye chekufambisa, ndapota tarisa kune edu Bhuku Rekudzidza.
Yevadzidzi Vepasi Pese Kubvumidzwa
International Admissions kuHodges U
Kupinda Hodges U kuri nyore! Isu takagadzirisa maitiro ekubvuma evadzidzi vedu vepasirese, zvichiita kuti zvive nyore kupfuura nakare kose kuenda kukoreji muUnited States. Isu tinopawo epamhepo degree zvirongwa saka kunyangwe kana iwe uchida kugara padhuze nepamba pako, unogona achiri kuenda kuHodges U uye kuenda kure muhupenyu hwako basa.
Hodges University inobvumidzwa pasi pemutemo wehurumende kunyoresa vadzidzi vasiri vekunze. Uye isu tinofara kuti urikufunga Hodges kune degree rako! Vanogona kuve vadzidzi vepasirose vanosarudzwa sevakadaro kana vasiri vagari vemuUnited States, vaviri vagari, kana vagari vechigarire, uye vari kunyorera F-1 mudzidzi vhiza kana J-1 Shanduro Yevashanyi vhiza (kuchinjana mavhiza evhiza anogona kushandiswa kune vadzidzi kana vadzidzi). Ndokumbira utarise neyakagamuchirwa maererano neyako inodiwa degree degree kukodzera kudzidza kwepasirese sezvo asiri ese mapurogiramu anotenderwa neUS department reHomeland Security, Mudzidzi Shanduko Yevashanyi Chirongwa, kana Dhipatimendi reHurumende reUS kunyoresa vadzidzi vepasirese.
Pane matanho akati wandei auchazodiwa kuti uzadzise kukodzera kuenda kuHodges University uye isu takagadzirira uye tinowanikwa kuti tikubatsire kutanga.
Matanho Ekugamuchira Kwenyika Dzepasi Pose
Complete an kunyoresa yekubvuma uye kuendesa isingadzokere mari yekunyorera.
Zvinyorwa, zvakaongororwa zviri pamutemo nesangano rakatenderwa rekuongorora, yedzese kosi isina kutorwa kuburikidza nesangano rinotenderwa reUS. Kushanya naces.org kune runyorwa rwemasangano anotenderwa.
Humbowo hwerutsigiro rwemari hunoratidza humbowo hwemari, inokwana kubhadhara mutengo wepagore wekupinda pamwe neyakajairwa mari yekugara. Mari iri mubhangi account account (s) inofanirwa kunge yakaenzana nemasemita maviri edzidzo nemari. Iwe unogona kushandisa anosvika mashanu (5) emabhangi maakaunzi akanyanya. Ndokumbira utaure nemupi wezano wekubvuma kuti utaure nezve ako ega mamiriro uye maitiro avanogona kukanganisa ichi chinodiwa
Uchapupu hweChirungu Chinodiwa
Vese vanyoreri vekunze vane mutauro weko kwete Chirungu vanofanirwa kuendesa humbowo hwehunyanzvi hweChirungu mune imwe yeanotevera nzira:
TOEFL iBT mamaki angangoita 79, komputa-yakavakirwa 213, kana yakanyorwa 550; OR
IELTS zvibodzwa ine yakazara band mhedzisiro ye6.0 kana kupfuura; OR
SAT Uchapupu-Hwakavakirwa Kuverenga nekunyora mamakisi e550; OR
Kubudirira kupedzisa iyo IEP0002 Yakanyanya Chirungu Chirongwa.
Izvo zvinodikanwa zvinogona zvakare kugutsikana nekutumira chimwe cheanotevera:
650-izwi rakatemwa rondedzero (yevadzidzi vakapedza angangoita matatu akateedzana makore kuchikoro uko Chirungu ndiwo mutauro wekurairirwa); OR
Chikamu che4 kana 5 paKoreji Board Yepamberi Kuiswa Chirongwa (AP) bvunzo muChirungu Mutauro; OR
A 5 kana yakakwira pane iyo IB (International Baccalaureate) Yepamusoro Level Mutauro Bvunzo muChirungu; OR
Yakafanotaurwa IB mamaki makumi matatu nemaviri kana zvirinani OR
Kupedziswa kweChikoro chepamusoro pachikoro chekutaura Chirungu.
Vadzidzi vanobva kunyika dzisiri dzekuChirungu vasina humbowo hwehunyanzvi hweChirungu, kana zviyero pazasi pechinodiwa zvishoma, vanozotambirwa nemamiriro uye vanofanirwa kugutsa hunyanzvi hweChirungu vasati vatanga chirongwa chavo chedhigirii.
Native Chirungu vatauri: Zvizvarwa zveUnited Kingdom, Republic of Ireland, Australia, Canada, New Zealand, kana dzimwe nyika uko Chirungu ndiyo mutauro wepamutemo UYE vasingazadzise chero zvataurwa pamusoro apa, vanofanirwa kutaura neHofisi yeAdmissions kuti vaone maitiro ekusangana nevanogamuchirwa. zvinodiwa.
Paunenge wagamuchirwa, vadzidzi vepasirese vanofanirwa kubhadhara chikamu chekutanga chemutengo wekupinda. Kutevera izvo, vadzidzi vanozokwanisa kunyorera iyo Form I-20 inodiwa kuti uwane mudzidzi VISA kubva kuvakuru munyika yemudzidzi.
Majani Lullein (Mutevedzeri weMutungamiri) - ESL, Paralegal
Semhedzisiro yebasa rake mukati memunharaunda seMutevedzeri weMutungamiriri weAnchorage Productions Media, pamwe nekuzvipira kwake kudzidza uye kubudirira kuHodges, anomiririra yunivhesiti iri munharaunda yevaSpanish. Kwemakore gumi, Lullein akaramba achishanda semutauriri, achigovana nyaya yake yekubudirira kuburikidza neTV, magazini, mapepanhau, uye nhepfenyuro, achiti, “Ndinosangana nevanhu vanogovana neni ruzivo rwavo rweHodges. Vazhinji vavo vanobva kune dzimwe nyika, vanhu vane tarisiro huru nezviroto, uye vanondiudza kuti nyaya yangu yekukunda mitauro netsika dzakavakurira yakavakurudzira kudzidza zvakawanda, kushanda nesimba, uye kuwana dzidzo yavo. ”